PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ဝ ဆိုတာ တရုတ်မဟုတ်ပါ
ဝ ဆိုတာ တရုတ်မဟုတ်ပါ
Title: Heritage Hunter Wa People Caves ( part2)
Directed by: Vincent Fong
On the borders of China and Myanmar, where the mountains meet the heavens, is where an ancient tribe of people known as the Wa make their home. Known for their savage headhunting traditions in the past, today they are famous for their love of song and dance. The Wa believe that when they learn to... talk, they sing. When they learn to walk, they dance.
ယခုတင်ပြမှာကတော့ ၀လူမျိုးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်.. ဒီ documentary video ၀လူမျိုးများရဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဓလေ့စရိုက် အနုပညာ အပိုင်းကို တင်ဆက်ထားပါတယ်...
၀ လူမျိုး- ရှမ်းပြည်နယ်၏ အရှေ့ပိုင်း တရုတ်ပြည်နယ်ခြားအနီး ၌ နေထိုင်ကြပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Tourism အပိုင်းမှာ ၀လူမျိုးမှာရှိရာဒေသတွင် မလုပ်သေးသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကျယ်တ၀င့် လုပ်ကိုင် လာသောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ၀ လူမျိုးများ အကြောင်းကို ဒီ Video အနေဖြင့် တင်ပြထားပါတယ်
၀လူမျိုးများသည် မြန်မာနှင့် တရုတ်တွင် နေထိုင်ကြပြီး border ခြားသော်လည်း သူတို့ ရဲ့ရိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဓလေ့စရိုက် အယူအဆများကတော့ တူတူရှိနေဆဲပါ.. ကဲ ၀ လူမျိုးများရဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဓလေ့စ ရိုက်လေးတွေကို အားပေးလိုက်ကြပါအုံး...
သတင်းရင်းမြစ် - ဂါမဏီ မီဒီယာ
Posted by PNSjapan at 9:17 AM